LegitVPN.com - tụlee ndị kacha mma VPN kacha enye gị ọrụ
VPN kacha mma
Best VPNs maka Netflix
VPN kacha mma maka China
VPN kacha mma maka Chrome
VPN kachasị mma maka Torrent
Kasị Mma nke Kasị Mma VPN si
Mmadụ Bịa ka LegitVPN.com - anyị bịara iji duzie gị ka ị họrọ ihe kacha mma VPN maka mkpa gị.
Anyị na-enyocha VPN ndị na-enye ọrụ nchekwa na ngwa ngwa iji gosipụta ntụkwasị obi ha.
Tụlee ndị kacha enye VPN ọrụ
Ndị Kachasịsị mma na ndị kasị mma VPN maka afọ 2020
Gụọ nyocha niile
Nyocha oge 30 na-akwado
Dakọtara na Netflix, BBC & Disney + Hulu
N'ime mba 55
Gaa na saịtị NordVPN
N'ime mba 90
Gaa na saịtị ExpressVPN
Dị ọnụ ala VPN n'ebe ahụ
Gaa na saịtị VPN Surfshark
Nyocha oge 45 na-akwado
Gaa na saịtị CyberGhostVPN
Nyocha oge 31 na-akwado
N'ime sava 2000
Gaa na saịtị dị ọchaVPN
.Dị kachasị elu
Kpọghe Geo-mgbochi mfe na gụgharia-dakọtara VPNs. Anyị na-edozi edemede dị mfe iji duzie gị.
Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị eji n'ụwa. Ọ dị ezigbo mkpa iji chebe cybersecurity gị na amaghị aha gị na ngwaọrụ VPN.
Onye ọ bụla na-eji ịntanetị eme ihe kwesịrị ịkpachara anya na Tọvanọ na softwares ndị ọgbọ na ibe. Anyị na-atụ aro iji VPN maka nzuzo.
China siri ike na atumatu banyere ịbịaru sọfụ ụwa niile. N'ihi na ndị njem nleta na ọ pụrụ ịbụ n'ezie manụ.
Kedu ihe bụ VPN?
VPN a makwaara dị ka netwọk onwe nke onwe bụ ihe ị nwere ike ịnụ banyere. VPN bụ ngwanrọ na-echekwa njikọ dị n'etiti onye nata na onye na-ezipụ. Ọ na-eme ka ọha na eze na-aga ahịa na-amaghị aha. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ya maka nzuzo na amaghị aha mana ọ na-ejikarị ya eme ihe site na mbupụ geoblocks nke ndị gọọmentị nwere ike ịtọ.
Ọtụtụ ọrụ gụgharia na-ebipụta ihe nkiri ọhụụ na usoro ọhụụ na USA dịka ọmụmaatụ tupu ha ejedebe na obodo gị.
Na VPN ị nwere ike ịnweta ọdịnaya dị na USA, n'ihi na webserver chere na ị nọ na US.
Kedu ihe m kwesịrị ịme mgbe m na-ahọrọ ọrụ vpn kwesịrị ekwesị?
E nwere ọtụtụ narị VPNs n'ebe ahụ mana anyị na-atụle ndị kachasị. Ọtụtụ n'ime ha na-ekwe nkwa ụgha na ha enweghị ike ịnapụta, naanị anyị na-akwado VPN ndị nọrọ ogologo oge ma bụrụ ndị amaara na ụlọ ọrụ nchekwa. Na 2017 ọtụtụ nyocha gosipụtara na e nwere ọtụtụ ndị na-eji VPN enweghị ihe gam akporo na-eme ihe iji nweta ohere na-enweghị nsogbu nye ndị metụtara nsogbu.
Enweghi vpns n'efu, naanị nnwale efu ma ha nwere ike ịchọta n'elu peeji a.
Kedu otu esi amata bụ legit VPN?
Adịghị mkpa ka nchegbu banyere nke ahụ. Anyị anwalelarị njikọ VPN kachasị echedo nke ndị ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi na-agba gburugburu ụwa.
VPN ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ?
N’ebe ụfọdụ, nke a nwere ike ịbụ eziokwu. Anyị nwalere ọtụtụ narị ndị ọrụ VPN dị iche iche iji hụ nke nwere ike ịnye arụmọrụ kacha mma na-enweghị efunahụ ihe ndị dị mkpa. Ọbụna anyị nwalere ha n'egwuregwu na iyi iji hụ ma ha bụ n'ezie ihe ha na-ekwu.
Ndi VPN intaneti na-adighi nma?
Kpamkpam. Mgbe ị na-eji VPN ị bụ kpam kpam na-amaghị aha na nchebe. Onweghi onye ma ihe ị n’eme, onye ị bụ na ebe ị nọ.
Ndi VPN ewepu nje na trojans?
O di nwute na mba. A na-ahụkarị VPN dị ka antivirus mana ha abụghị. Ha na echedo njikọ gị naanị na websaịtị niile. Ha agaghị echebe gị na faịlụ ị na-ebudata ma ọ bụ ibe ndị ị gara.
Achọrọ m imechi VPN mgbe anaghị m eji ya?
Mba i ghaghi. Ọtụtụ mmadụ na-edobe ya oge niile iji bulie ihe nzuzo. Abịa na ekwentị na ekwentị mkpanaaka ọ nwere ike iri batrị.
Otu esi eji oru VPN?
Iji VPN dị mfe na ngwa ngwa, ọ na-amalite site na usoro dị mfe.
Chọta VPN kwesịrị ekwesị maka mkpa gị. Anyị na-enyere gị aka n'akụkụ a ka ị ghara ịme nyocha na-ewe oge site n'aka gị, dịka anyị nwalere ndị niile nyere VPN.
Ozugbo ịzụrụ VPN ị chọrọ ka ị nweta nzere gị. A nzere a banye na gị Okwey na enye website na wụnye ngwa na ngwaọrụ ị chọrọ. Ọ nwere ike ịbụ laptọọpụ, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ desktọọpụ. Nwere ike nweta ya na ha niile.
Ugbu a ị wụnyela ngwanrọ ọ bụ oge ịmalite ya ma jikọọ na ebe ị họọrọ.
Ntuziaka kachasị amasị
Olee otú VPN si arụ ọrụ?
Hụ otu esi dị mfe iji wụnye na iji. Naanị akụkụ aghụghọ bụ ịchọta ihe kacha mma VPN maka ikpe gị.
Ozi cybersecurity na patches
Nsogbu Cisco & Firepower 23.7.2020
Onye ọ bụla nke na-eji Cisco na Firepower kwesịrị imelite ndị ọkwọ ụgbọala ha ozugbo. Achọpụtala nsogbu dị oke egwu.
Ndi anyi no na LegitVPN.com
Anyị bụ otu ndị nọ na ụlọ ọrụ cybersecurity ruo ọtụtụ iri afọ. Anyị nwere mmasị ichedo nzuzo nke onwe na data nkeonwe. Nke ahụ bụ ihe onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị ijide onwe ya. VPNs bụ ụzọ kachasị mma na nke kachasị mfe iji chebe onwe gị ọzọ cybercrim ozugbo. Anyị maara na enwere ike ịdị iche VPN na-enye ụfọdụ n'ime ha naanị maka ebumnuche na-akwadoghị. Ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a iji duzie gị ịchọta VPN kacha nwee nchebe na nchekwa.
Maka gịnị bụ VPNs maka?
Okwey (mebere onwe netwọk) isi ọrụ bụ na-gị internet-nche etoju elu na-tunneling njikọ gị na-ezo gị IP-adress si nwere hackers.
Enwekwara ike iji VPN nweta ọdịnaya geoblocked dị ka ikiri iyi mba ndị ọzọ na channelụ TV.
I nwekwara ike ibudata data site na ịntanetị ka ị na-echekwa njikọ gị na-enweghị aha na nchekwa
Nchedo Intanet bu ihe anyi nile kwesiri ilebara anya. Cybercrimes na-arị elu mgbe niile na ọtụtụ ọgụ na-arịda kwa ụbọchị.
Mwakpo a na-ahụkarị bụ Ddos (arụpụtaghị ọrụ) nke na-agbaji njikọ gị ma ọ bụ mmebi data ochie ebe data nkeonwe gị nwere ike ịdaba na aka ọjọọ.
Iji jide n’aka na ịnọ n’udo ị ga-eji VPN ndị na-enye ọrụ echekwa, na-eme ngwa ngwa ma dịkwa nchebe.
Anyị bụ otu ndị nwere mmasị ichedo nzuzo anyị na ibe anyị. Zọ kachasị mma iji mee nke ahụ bụ ịnweta VPN kwesịrị ekwesị. Site na ịnwale na ịtụle ndị ọrụ VPN dị iche iche anyị nwere ike inyere ndị na-azụ ahịa aka ime mkpebi ka mma.
Nyochaa CyberGhost VPN
VPN kacha mma maka
Cisco Asa na Firepower enweghị ike
2020 LegitVPN.com - ihe kacha mma VPN kacha mma